Fanadiovan-drivotra / azo sotroina / AP-P01
Io fanadiovan-drivotra mahomby io dia manadio tanteraka ny fandotoana ny rivotra amin'ny fanadiovana dingana marobe, manivana amin'ny fomba mahomby ireo potipotika PM2.5, volo, vovobony, vovoka ary ireo zavatra hafa rehetra. Ny sosona karbaona mihetsika dia manala ny fofona sy ny olana manimba simika. Ary arahan'ny ionoka mitentina 80 tapitrisa pcs / cm³negative avoaka hamorona tontolo iainana anaty fiara. Ny fanamasinana fiara iray manontolo dia manome anao tontolo ivoahan'ny fiara azo antoka sy mahasalama, avelao hankafizanao amin'ny dia mahasalama.
Jiro malefaka amin'ny alina. Ny endriny tsara tarehy dia mahatonga azy io ho haingon-trano tsara koa.
Izy io dia miaraka amina bateria, azo alaina na aiza na aiza tianao hametrahana azy.
Fanadiovan-drivotra / azo sotroina / AP-P02
Ny fanadiovan-drivotra dia miaraka amina batterie, ahafahanao mitondra azy io na aiza na aiza ho fiarovana. Miaraka amin'ny fiasan'ny herin'ny masoandro, angovo madio io. Izy io dia manambatra ny fanadiovana karbaona sy ny ion tsy miiba, ny lafiny rehetra dia miaro anao ary manadio ny rivotra madio tsara azo antoka ho anao.
Izy io koa dia fanamainana mando sy fofona ho an'ny fiara, efitranonao na toerana fitsangatsanganana. Manome anao olona tonga lafatra 100% amin'ny dia ataonao.
Fanadiovan-drivotra / azo sotroina / AP-P03
Ity fanadiovan-drivotra modely ity dia miaraka amin'ny fanadiovana karbonika mavitrika, manala ny zavatra simika manimba sy ny gazy toy ny formaldehyde, benzene ary VOC, suite ho an'ny fiara vaovao. Izy io koa dia manala ny fofona ratsy, raha manana biby ianao dia manampy amin'ny fanesorana ny fofona tsy mahafinaritra azy koa. Ny mpanadio dia miaraka amn'ny mpamokatra ions miiba izay miteraka iônaly tsy mitongilana 15 tapitrisa pcs / cm³ izay miasa ho efitrano madio voadio, manala ny fandotoan'ny poti, PM2.5, vovoka, vovobony ary setroka. Diovy ny efi-trano, mamorona toerana madio sy mahasalama toy ny mijanona ao anaty ala, manamafy ny hery fiarovan'ny hery fiarovan-tena, tsy atahorana ho voan'ny loza mety hitranga. Izy io dia miasa amin'ny 3m³- 9m³, mety amin'ny fiara sy efitrano kely.
Izy io dia namboarina tamin'ny fiasan'ny aromatherapy, manao ny hanitra tianao ianao. Raha apetraka anaty fiara io dia afaka mankafy dia mahafinaritra ianao, manamaivana ny fihenjanana, miala sasatra ny hozatra, ny dia lavitra toa tsy mankaleo sy lava loatra. Miaraka amin'ny asa fanadiovana, ny mpanadio rivotra dia mamorona efitrano ahazoana aina mahasalama.
Miaraka amin'ny mpihazona telefaona io, azonao atao ny mametraka azy ao anaty fiara handehanana amin'ny GPS, na amin'ny fotoana miala sasatra dia mankafy sarimihetsika any ho any. Miaraka amin'ny bateria mahazaka 1000mAH, azo entina izy io ka afaka mitondra azy any amin'izay tianao, mankafy fotoana fialan-tsasatra. Aza adino ny mametraka azy io any amin'ny toerana mety hahazo masoandro satria mavesatra be ny herin'ny masoandro, amin'izay ianao tsy hanahirana ny olan'ny herinaratra.
Izy io dia fanadiovan-drivotra mahafinaritra ho an'ny fiara, mitondra anao mora lavitra amin'ny diany mitondra fiara.
Mitombo Ligh, Mamboly hazavana, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry, Mitombo Lightin,